Mpahay lalàna, Rabenarivo Sahondra: « Aza ariana ny zo hifidy fa ho lasan’ny hafa izany… » | NewsMada
Mpahay lalàna, Rabenarivo Sahondra: « Aza ariana ny zo hifidy fa ho lasan’ny hafa izany… »
Nivahiny tao amin’ny radio Alliance 92 FM amin’ny alalan’ny fandaharana “Ambarao” ny mpahay lalàna sy mpikambana eo anivon’ny fiarahamonim-pirenena, Rabenarivo Sahondra. Nitondrany ny heviny izao fiatrehantsika ny fifidianana izao.
Nanafatrafatra… “Mety ho kivy isika fa tsy hita ny maha samihafa ireo kandidà 36 na koa hilaza fa tsy tiana Ranona na koa efa teo ireo… Sahiko anefa ny milaza fa hany itoviantsika rehetra, na iza na iza, ny safidy amin’ny biletà tokana. Ho lasan’ny olona izany raha tsy mifidy isika satria tsy misy sary ny kara-pifidianana. Aza avela ny hafa no hifidy eo amin’ny toerantsika. Mandehana mifidy fa sao himenomenona eto isika mandritra ny dimy taona…”, hoy izy.
Efa tara loatra ireo kandidà 22
Momba ny hetsika itambaran’ireo kandidà 22 kosa amin’ny fitsikerana ny lisi-pifidianana, nambarany fa efa tokony tany aloha ny nilazany izany. Tokony ho fantatr’izy ireo mialoha ny lalàna, satria efa tamin’ny volana janoary izany. “Tara loatra izy ireo. Efa resy am-boalohany ka tsy te handray anjara amin’ny fampielezan-kevitra. Hararaotina harangaranga izany resaka izany. Mety ho tetik’ireo kandidà ireo hanemorana ny fifidianana ireny nefa tsy maintsy miroso isika. Tsy maintsy arahina ny lalàna ka tokony hanana filoha vaovao isika amin’ny volana janoary”, hoy Rabenarivo Sahondra.
Notsiahiviny fa nahitana fanavaozana ny fifidianana tamin’ny taona 2013. Navoaka tamin’ny aterineto ny voka-pifidianana. Hita koa ny isan’ny mpifidy isaky ny birao fandatsaham-bato… “Tsy mba nohatsaraina izany ary mahakivy amin’izao fotoana izao. Isika izao tsy mahalala ny fitombon’ny isan’ny mpifidy. Ny birao fandatsaham-bato hifidianana… Olana koa, tsy mba misy manentana na miresaka ny mpifidy ary tsy re ny fanjakana ka lasa hoatra ny tsy taitra ny olona… Ny mpanao politika ihany no hitabataba sy heno etsy sy eroa”, hoy izy.
An-taratasy fotsiny ihany ny lalàna…
Eo amin’ny fampiharana ny lalàna, nambarany fa an-taratasy fotsiny ihany izany. Tsy hita ny tompon’andraikitra hampihatra izany. Ohatra ny momba ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. “Tsy misy mihetsika ka mety handika lalàna ny olona”, hoy ihany izy. Namaranany ny resaka ny haha lavorary ny fifidianana ary tsy tokony hisy ny olana. Aoka ho mailo mba tsy hiangarana ny safidy. Tokony hijery sy hitady ny vinan’ny kandidà sy ny fandaharanasany ary hanaraka ny adihevitra samihafa etsy sy eroa. “Isika sy ny vatontsika no tompon’ny teny farany ka ataovy tsara ny safidy ary mandehana mifidy”, hoy izy.